Like most website operators, The Tabloid Zimbabwe collects non-personally-identifying information of the sort that web browsers and servers typically make available, such as the browser type, language preference, referring site, and the date and time of each visitor request. The Tabloid Zimbabwe’s purpose in collecting non-personally identifying information is to better understand how The Tabloid Zimbabwe’s visitors use its website. From time to time, The Tabloid Zimbabwe may release non-personally-identifying information in the aggregate, e.g., by publishing a report on trends in the usage of its website.
The Tabloid Zimbabwe also collects potentially personally-identifying information like Internet Protocol (IP) addresses for logged in users and for users leaving comments on http://thetabloidzim.co.zw blog posts. The Tabloid Zimbabwe only discloses logged in user and commenter IP addresses under the same circumstances that it uses and discloses personally-identifying information as described below.
Certain visitors to The Tabloid Zimbabwe’s websites choose to interact with The Tabloid Zimbabwe in ways that require The Tabloid Zimbabwe to gather personally-identifying information. The amount and type of information that The Tabloid Zimbabwe gathers depends on the nature of the interaction. For example, we ask visitors who sign up for a blog at https://thetabloid.co.zw to provide a username and email address.
The Tabloid Zimbabwe may collect statistics about the behavior of visitors to its website. The Tabloid Zimbabwe may display this information publicly or provide it to others. However, The Tabloid Zimbabwe does not disclose your personally-identifying information.
To enrich and perfect your online experience, The Tabloid Zimbabwe uses “Cookies”, similar technologies and services provided by others to display personalized content, appropriate advertising and store your preferences on your computer.